Guddiga dhameystirka sharciga doorashooyinka oo lagu amray inay deg deg u soo dhameystiraan | Xaysimo
Home War Guddiga dhameystirka sharciga doorashooyinka oo lagu amray inay deg deg u soo...
Guddiga dhameystirka sharciga doorashooyinka oo lagu amray inay deg deg u soo dhameystiraan
Guddiga wadajirka ah ee labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya ee loo xil saaray dhameystirka hab-raacyada Doorashooyinka Qaranka ayaa lagu amray inay toddobaad kusoo dhameystiraan shaqada loo igmada.
Go’aankan ayaa lagu gaaray kulan shalay warbixin looga dhageystay guddiga oo ay ku hortageen guddoonka baarlamanka.
Guddoomiyaha guddigaas, Xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow ayaa sheegay in qabyo qoraalkii u dambeeyay hadda ay gacanta ku hayaan, islamarkaana dhowaan guddoonka ku soo wareejin doonaan hab-raacyo dhameystirka sharciga doorashooyinka qaranka.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal ayaa guddigan ku amaanay shaqadii ay soo qabteen, isagoo intaas ku daray in dalka uu doorashooyin galayo, islamarkaana guddiga looga fadhiyo in ay shaqadooda ku idleeyaan muddo todobaad ku siman.
Guddigan Wadajirka ayaa guddoonka baarlamaanka waxaa ay u xil saareen in ay soo dhiraandhiriyaan hab-raacyo afar ah oo uu tilmaamayo sharciga doorashooyinka Qaranka sida; Koontada haweenka ee baarlamaanka, sida deegaanada loo qeybinayo kuraasta xubnaha baarlamaanka, waxa laga yeelayo magaalada Muqdisho iyo sida loo dooran doono xubnaha baarlamanka ee ka soo jeeda gobolada Waqooyi ama Somaliland.